သက်ဝေ: ပခုက္ကူ ရေဘေး အလှူ နောက်ဆက်တွဲ သတင်း
မိုးငွေ့...... October 27, 2011 at 1:39 PM
ဒီအလှူဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် တတက်တအားပါဝင်လုပ်ဆောင်ရင် အောင်မြင်သွားတဲ့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်အမ....။ အလှူရှင်တွေလက်ထဲကို မကြာမီရောက်တော့မယ့် အလှူတွေအတွက် ပီတိဖြစ်မိပါတယ်..။
Nyi Linn Thit October 27, 2011 at 6:53 PM
ဝမ်းသာစရာပါပဲ မသက်ဝေရေ..၊ Western Union နဲ့ မဟုတ်ဘဲ တခြားနည်းနဲ့ ငွေလွှဲလို့ရမယ့် နည်းလမ်းများ ရှိရင်တော့ သိချင်ပါတယ်၊
Hmoo October 28, 2011 at 11:22 AM
ပြည်ပမှာဘဝထူထောင်ရင်းကိုယ့် ပြည်သူတွေကိုလည်း ကူညီကယ်ဆယ်ကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက
Unknown October 28, 2011 at 11:33 PM
I just transferred 110 SGD to Ma Chit Kyi Aye's account for donation.
သက်ဝေ October 29, 2011 at 9:16 AM
ကော်မန့်တွေအတွက် ကျေးဇူးပါ... တတ်နိုင်သလောက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်...။
ကိုညီလင်း - ဘယ်လိုလွှဲချင်တာလဲ... Bank To Bank လွှဲချင်တာလား... thetwai.blog@gmail.com ကို ဆက်သွယ်ပေးပါ... ကျေးဇူး...
Pink Lover... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... မချစ်ကြည်အေး စစ်ပြီးရင် ညီမရဲ့ Pink Lover ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ update လုပ်ပေးပါ့မယ်...
အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက် ညနေ ၆ နာရီ အထိ လက်ခံရရှိထားသော အလှူငွေ စုစုပေါင်းမှာ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ ၃၁၄၀.၂၁ ဖြစ်ပါတယ်...း)
သက်ဝေ October 29, 2011 at 10:13 AM
@Pink Lover... ညီမအလှူငွေ ကောင်းမွန်စွာ လက်ခံရရှိပါကြောင်း...း))
I just transferred SGD-50 to Ma Chit Kyi Aye's account for donation.
မေသိမ့်သိမ့် ကျော် October 31, 2011 at 1:11 AM
မသက်ဝေရေ သာဓုပါရှင်။ ဘယ်သူ့ဆီဆက်သွယ်ရမလဲရှင့်။ အချိန်က အရမ်းကပ်နေပြီ။
မြသွေးနီ October 31, 2011 at 4:45 PM
ဆောင်ရွက်မှုအ၀အ၀အတွက် ၀မ်းမြောက်စွာ သာဓုခေါ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်..။